Isaya 50 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
50 Utsho uYehova ukuthi: “Siphi na, ke, isiqinisekiso soqhawulo-mtshato+ sikanyoko endamndululayo?+ Okanye nguwuphi na kubabolekisi bam endithengise ngani kuye?+ Khangelani! Ngenxa yeziphoso zenu+ nithengisiwe, nangenxa yokunxaxha kwenu unyoko uye wandululwa.+ 2 Yini na ukuba ndifike, kungekho bani?+ Ndibize, kungabikho uphendulayo?+ Sifutshane kakhulu na isandla sam ukuba singakhulula,+ okanye akukho mandla okuhlangula na kum? Khangela! Ndomisa ulwandle+ ngokhalimelo lwam;+ ndenza imilambo ibe yintlango.+ Iintlanzi zalo ziyanuka ngenxa yokungabikho kwamanzi, yaye ziyafa lunxano.+ 3 Ndambesa amazulu ngokusithakala,+ ndiwenzele isigqubuthelo ngamarhonya.”+ 4 INkosi enguMongami uYehova indinike ulwimi lwabafundileyo,+ ukuze ndiyazi indlela yokuphendula odiniweyo ngelizwi.+ Iyandivusa iintsasa ngeentsasa; iyayivusa indlebe yam ukuze ive njengabafundileyo.+ 5 INkosi enguMongami uYehova iyivulile indlebe yam, yaye mna andibanga nemvukelo.+ Andijikelanga kwicala elahlukileyo.+ 6 Ndawunikela umhlana wam kubabethi, nezidlele zam+ kwabo baxhwitha iinwele. Andibufihlanga ubuso bam ehlazweni nasekutshicelweni.+ 7 Kodwa iNkosi enguMongami uYehova iya kundinceda.+ Kungenxa yoko le nto ndingayi kuziva ndithotyiwe. Kungenxa yoko le nto ndimise ubuso bam njengeqhwitha, yaye ndiyazi ukuba andiyi kuba nazintloni.+ 8 Lowo undivakalisa ndililungisa usondele.+ Ngubani na onokusukuzana nam? Masime ndawonye.+ Ngubani na ochasene nam kwezokugweba?+ Makasondele kum.+ 9 Khangela! INkosi enguMongami uYehova iya kundinceda. Ngubani na onokundivakalisa ndingongendawo?+ Khangela! Bonke baya kuphela njengesambatho.+ Inundu liya kubadla libagqibe.+ 10 Ngubani na phakathi kwenu owoyika+ uYehova, ephulaphula ilizwi lomkhonzi wakhe,+ ohambe ebumnyameni obuqhubekayo+ nalowo bekungekho kuqaqamba kuye? Makakholose ngegama likaYehova+ aze azixhase ngoThixo wakhe.+ 11 “Khangelani! Nonke nina baphemba umlilo, bakhanyisa iintlantsi, hambani ekukhanyeni komlilo wenu, naphakathi kweentlantsi enizivuthisayo. Ngokuqinisekileyo esandleni sam naku eniya kuba nako: Niya kulala phantsi nisentlungwini ngokupheleleyo.+